Qoricha fakkeeffame: ‘Namoonni guyyaa guyyaan du’aa jiru’ - BBC News Afaan Oromoo
Qoricha fakkeeffame: ‘Namoonni guyyaa guyyaan du’aa jiru’
Goodayyaa suuraa Daa'imman dhibee busaaf heddu saaxilamoo dha, qorichaa fakkeefame omishame kennuufi jechuun ammoo murtee du'aa irratti murteessu jechuu dha
Daa'imni kee busaa, dhukkuba daa'imman ajjeesuudhaan addunyaarratti sadarkaa duraarratti argamuun rakkaataa osoo jiruu/tuu arguu yaadimee. Mallattoon isaa gubaa/o'a qaamaa cimaa, haqqee/didiksaafi hollachiisaadha.
Garuu dukkana qorichaa naannootti argamurraa qoricha dhukkubicha yaalu danda'a jettu argachuun danda'a jette waan yaadduuf homaa miti.
Ammas qorichi ati daa'ima koo naaf fayyisa jettee yaaddu yeroo daa'ima kee si jalaa ajjeesu waan sitti dhagaahamuu danda'u yaadimee.
Daldalli qoricha fakkeefamanii dolaara biiliyoona hedduun gara jabinaan addunyaarratti gaggeeffamaa jira.
Akka ibsa Dhaabbata Fayyaa Addunyaatti Afrikaa keessatti namoonni 120,000 ol ta'an qoricha busaa fakkeefamee hojjetame fudhaachuun lubbun isaanii darba. Sababiinsaas qorichoonni kun sadarkaadhaan gadii ykn qabiyyee dawaa of keessaa kan hin qabne wan ta'aniifi.
Qorichoonni sadarkaadhaan gadi ta'an fii qabiyyee dawaa of keessaa hin qabne du'aaf nama saaxiluu danda'u. Keesumaa dhukkuboonni akka busaafi daranyoo sombaa qoricha akka dandamatan taasisuun dhukkubsattoota balaa hamaaf saaxila.
Goodayyaa suuraa Qorichoonni fakkefamaniifi hataman daandii gubbaatti ifumatti gurguramu
Tilmaman, qorichoonni busaa biyyooti Afirikaa sahaaraa gadii ta'an keessatti raabsaman tokko sadaffan kanneen fakkeefamanii hojjetamanii dha.
Qorichoonni fakkeefaman karaa dukkana qorichaa, kilinikaafi daldala daandiin, ykn karaa toora marsariitii to'annaa hin qabnee gurgurtaaf dhiyaatu.
Haata'u malee warreen hojii kanatti seenaa jiran tekinooloojii fayyadamuudhaan rakkoo kana xiqqeessuuf carraaqaa jiru.
'Salphaa fi rakasa'
Kampaaniin Ispirooksiil jedhamu mala namoonni bitatan qoricha sirriifi kan fakkeefame ta'uu ittiin adda baafatan ykn wiirtuu hojjetoonni sa'aatii 24 guyyaa toorbanuu hojjetanitti bilbiluun mirkaneeffachuu dandessisu dhiyeessan. Ispirooziil warra fayyadamaniif jajjabina akka ta'uuf badhaasa akka kaardii mobaayilii guutaafii beeksisaa jira.
Goodayyaa suuraa Fayyadamtoonni koodii addaa qorichichaa ilaaluun Ispirooziilitti ergaa gabaaba ergu
Kaampaaniiwwan qorichaa sadarkaa addunyaatti hojjetan 70 ta'an warra akka 'GlaxoSmitKline' fi 'Novartis' dabalatee tajaajila kana argachuuf galmaa'aniiru. Erga tajaajilli kun bara 2009tti jalqabee mirkaneeffannoowwan miliyoona 28 ta'an akka addunyaatti hojiirra oolaniiru, jedhu dubbi himaan Ispirooziil Toluloop Gebamolayuun.
Goodayyaa suuraa Hoogganaan Ispirooziil Dr. Ashiifii Googoo sirni dhaabbanni isaanii ittiin hojjetu lubbuu baraaraa jira jedhanii amanu
"Ejjennoo of eeggannoo salphaafi baasiin isaa gadi aanaa ta'edha'', jedhu Obbo Gebamolayuun.
Afirikaa keesaatti saganaan kun Keenyaa, Gaanaa, Naayijeeriyaa, Taanzaaniyaafi yeroo dhiyoo kanatti ammoo Maaliitti hojiirra olaa jira.
"Haata'u malee dame keenya biyyoota Afirikaa hunda keessatti baballisuu yaalaa jirra," jedhan.
Dureessi beekamaa Biraayiti Simoonsi sirna walfakkaatu "mobaayiliin mirkaneeffadhu" Neetiwoorkii 'mPedigree' jedhamu waggaa 10 dura hundeesse.
Waraqaan koodii qabduufi istiikariin itti maxxantu dhabbata tekinooloojii guddaa Ameerikaa kan ta'e 'Hewlett-Packard' waliin ta'uudhaan akka maamiltoonni sirrummaa qorichaa wiirtuu daataabeezii waliin mirkaneessaniif gargaaru hojjetan.
"kana gochuuf garuu deemsa qoricha kanaa warshaa hanga itti fayydamaa bira gahutti jiru hordofuun barbaachisaa dha," jechuun BBC tti himan Simoon. "Apilikeeshiniin maamiltootaa itti fayyadamuuf salphaadha haata'u malee jalqabaa hanga dhumaatti hordofuun rakkisaadha."
Goodayyaa suuraa Fayyadamtoonni koodii addaa qorichichaa gara mPedigreetti erguun sirrummaa qorichicha beekuu danda'u
Akka Simoon tilmaamanitti namoonni miliyoona 75 ta'an qoricha fakkeefamaa Afirikaa keessatti qabamanirraa fayyadamaniiru. Amma 'mPedigree' guutummaa Afirikaafi Eezhiiyaa keessatti biyyoota 12 keessatti hojjeta.
Industiriiwwan qoricha omishan qoricha sobaa to'achuudhaaf tekinooloojiiwwan biroo hedduu gargaaramu.
Goodayyaa suuraa Qorichoonni fakkeefaman daldal qorichaa seeraan alaa keessatti heddumaatu
'Namoonni du'aa jiru'
Osoodhuma teeknooloojiin fala dhaahuutti jiruu maaliif sababa qorichootaa fakkeefamaniin lubbuun namootaa darbaa kaanis dararamaa jira laata?
"Qorichoonni sobaa baayyeen isanii Eezhiyaa keessatti omishamanii Afrikaatti ergamu," jedhu Simoon. " Daldalli qorichoota fakkeefaman kanaa guddaa dha, rakkina inni fidaa jiru wajjin wal bira qabamee yeroo madaalamu ammoo wanti nuti hojjechaa jirru muraasa.
"Kaampaaniwwan gurguddoon addunyaarratti qorichaa oomishan baayyee of qaboodha-toorarra galuudhaaf yeroo baayyee isaanitti fudhate," jedha. "Teekinooloojiiwwan haarofni hojiitti galaa jiran ofii isaaniitiin rakkooo kana furuun isaanitti cima."
Goodayyaa suuraa Braayit Siimoon malaammaltummaan duula qoriichoota fakkeefamanii hojjetaman irratti banameef rakkoo biraa ta'eera jedha
Obbo Gebamolayuun "Abbootii qabeenyaafi maamiltoota guutummaa adduunyaarra jiraniif hubannoo uumuu fii oduu gammachiisaa kana biraan ga'uu barbaanna, garuu namoota hedduu caalmaatti barsiisuu qabna," jedhan.
"Qoricha fakkeefamee hojjetame ammallee rakkoo guddaadha namoonni guyyaa guyyaadhaan du'aa jiru."
Malaanmaltummaanis sababa biraati akka Obbo Simoon jedhutti. Ministeeroonni qoricha deeggarsa mootummaan galan hatanii gatii ol ka'aadhaan dhuunfaatti gurguru; warri sakkata'aniis matta'aa fudhatanii yeroo qorichi fakkeefamaan fe'amee biyya seenu arganii akka hin argine fakkaatu.
Viidiyoo Qorichi bookee goyyoomsuun ajjeesu hojiirra oolaa jira